ကျွန်ုပ်တို့၏အသံ | Japan Care Worker Guide
・မွေးဖွားရာနိုင်ငံ – မြန်မာ
・ဂျပန်သို့လာခဲ့သည့်ခုနှစ် – ၂၀၁၉
・နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ – အလုပ်သင် အဆင့် ၂
・ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်း – N3
・ခွင့်ဗီဇာ – အလုပ်သင် အဆင့် ၂
・ဘာသာအရည်အချင်း – N3
ဘာကြောင့် ဂျပန်ကိုလာခဲ့တာပါလဲ? ဂျပန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ?
【မာမာဝင်း】ဂျပန်နိုင်ငံက ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့ နည်းပညာများ မြင့်မားသောကြောင့် ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဘိုးဘွားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာကို လေ့လာချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံကို လာဖို့ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလုပ်မှာ စိတ်ဝင်စားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောပြပေးပါ?
【မာမာဝင်း】အဖေနဲ့အမေ့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တာကစပြီးတော့ ဝါသနာပါသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ကျွန်မရဲ့ နိုင်ငံမှာ ဘိုးဘွားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကို လုပ်တာက ကုသိုလ်အများကြီး ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအလုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ဂျပန်နိုင်ငံက ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့ နိုင်ငံခြားလူမျိုးများ အလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံလို့ ထင်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဂျပန်နိုင်ငံက ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့ နိုင်ငံခြားလူမျိုးများ အလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံလို့ ထင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်တွေကို ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသလဲ?
【မာမာဝင်း】ဂျပန်ကိုမလာခင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်ကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ပြီးတော့ လေ့လာခဲ့ပါတယ်၊ ဂျပန်ကို ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဘိုးဘွားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစာအုပ်တွေ ဖတ်တာတို့၊ အလုပ်ခွင်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အထက်လူကြီးတွေဆီကို မသိတာ၊ ကိုယ်မသိတာတွေ မေးတာတို့ လုပ်ပြီးတော့ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ယူတျု့ထဲမှာ ရှာသလို အင်တာနက်ထဲမှာလဲ ရှာပါတယ်၊ အဲဒီအပြင် စာအုပ်တွေထဲမှာလဲ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ရဲ့လုပ်ရကျိုးနပ်ပုံနဲ့ ပျော်ရွှင်ရမှုက ဘာများဖြစ်ပါသလဲ?
【အိအိမွန်】စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေနဲ့ စကားပြောပြီးတော့ ကျော်ဖြတ်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】နေတဲ့အဆောင်နဲ့ အလုပ်နဲ့က နီးပါတယ်၊ အဲဒါကို ကြိုက်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】အင်း အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။
【မာမာဝင်း】အလွယ်တကူ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင်တာရယ်၊ ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက လတ်ဆက်တာရယ်ကို ကြိုက်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】အခုနေတဲ့ နေရာကနေပြီးတော့ စူပါတို့ ကုန်တိုက်တို့၊ ဘူတာတို့က နီးတဲ့အတွက်ကြောင့် သွားရေးလာရေးလဲ အဆင်ပြေတယ်၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလဲ အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီဟာက အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ မြန်မာပြည်တုန်းက နှင်းကျတာကို မမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ပထမဆုံး နှင်းကျတဲ့အချိန်က ကိုယ့်ဘဝအတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေက ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မကလဲ ဂျပန်စာ ဆရာမတယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် ပေးချင်တဲ့အမှာစကားကဘာလဲ?
【မာမာဝင်း】ဂျပန်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးများအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီးတော့ နည်းပညာတွေ တိုးတက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့နေရာတွေမှာလဲ လတ်ဆက်တဲ့အရာတွေကို စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့အတွက် လာစေချင်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကနေပြီးတော့ နည်းပညာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလဲ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအလုပ်ကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် အကြံပြုချင်ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ကိုယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ ဘိုးဘွားများက ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ကျွန်မတို့က နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးတွေ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဘိုးဘွားတွေက သူတို့လူမျိုးတွေနဲ့ နည်းတူ အတူတူ စကားတွေပြောပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေဟာမှာနေထိုင်တဲ့ဘိုးဘွားတွေရဲ့မိသားစုနဲ့ စကားပြောဖူးပါသလား? ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ပြောဖြစ်ခဲ့လဲ?
【မာမာဝင်း】ဘိုးဘွားတွေရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ဘိုးဘွားတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းတို့ ပြောဖြစ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ပါတယ်။
ဂေဟာမှာနေထိုင်တဲ့ဘိုးဘွားတွေဆီက ချီးကျူးခံရတာမျိုးရှိလား? ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောတာခံခဲ့ရလဲ?
【မာမာဝင်း】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ တော်တော်များများ နေသားကျလာပြီလို့ ပြောကြားခံခဲ့ရပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားသားလူမျိုး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဂျပန်စကားကို ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်လို့ ချီးမွှမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ပျော်စရာအကြောင်းလေးတွေနဲ့ ရယ်စရာမောစရာလေးတွေ ပြောပါတယ်။
【အိအိမွန်】ပြောဖြစ်တဲ့အရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ အဓိကကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့အလုပ်ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ပြောဖြစ်ပါတယ်။
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာ အလုပ်စလုပ်ပြီး ပထမဦးဆုံးသိခဲ့ရတဲ့အလုပ်နဲ့ နေထိုင်မှုဘဝမှာလည်း အသုံးဝင်ခဲ့တာတွေကဘာတွေလဲ?
【မာမာဝင်း】ရှိပါတယ်၊ အဟာရမျှတတဲ့ အစားအစာတွေစားတာတို့၊ ပြီးတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်စက်တာတွေရယ်၊ ပြီးတော့ ဆေးကို သေသေချာချာ အချိန်မှန်မှန်သောက်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ကို လုပ်ပြီးတော့ စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေက နေ့တိုင်း ရေနွေးစိမ်ကန်ထဲကို ရေနွေးဝင်စိမ်တာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပြီးတော့ ဒီဟာက ကိုယ့်ရဲ့ ဖြတ်သန်းတဲ့ ဘဝအတွက် အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတခုဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။
ဂေဟာကဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စကားပြောဆိုရာမှာ အခက်အခဲရှိခဲ့လား?
【မာမာဝင်း】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ မြန်မာမှာ သင်ကြားခဲ့တာက စာအုပ်ထဲက ဂျပန်စကားဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်လက်တွေ့ပြောတဲ့အခါ ဒေသစကားတွေ ကြုံတွေ့ရပါတယ်၊ ဒေသစကားတွေက ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ ကျွန်မက မြန်မာပြည်မှာတုန်းက လေ့လာခဲ့တာက ဂျပန်စကားဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီကလူမျိုးတွေ ပြောတဲ့စကားက သူတို့ ဒေသသုံးစကားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီစကားတွေကို ကျွန်မတို့ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒီအတွက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ကြင်နာတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေလို့ ထင်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】 ဘိုးဘွားတွေကို ချစ်ခင်တဲ့လူတွေလို့ ထင်ပါတယ်။
အခြားအလုပ်မဟုတ်ဘဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲ?
【မာမာဝင်း】ဘိုးဘွားတွေကို ပြစုစောင့်ရှောက်ရတာကို ဝါသနာပါလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာကို လေ့လာပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလဲ ပြန်လည် အသုံးချချင်လို့ပါ။
ဂျပန်ကိုရောက်ခါစက ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေပြောတာကို နားလည်ခဲ့လား?
【မာမာဝင်း】ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်၊ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ စကားကို ပြောတာကို နားလည်ပေမယ့် ပြန်ပြောဖို့ရာကျတော့ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဟုတ်ကဲ့ ဂျပန်စကားနဲ့ ပြောရင်တော့ အကုန်နားလည်ပါတယ်၊ သူတို့ဒေသသုံးစကားနဲ့ ပြောရင်တော့ နားမလည်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။
ဘိုးဘွားတွေပြောနေတဲ့စကားနဲ့ ဂျပန်လိုရှင်းပြတာတွေကို နားမလည်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်သလဲ?
【မာမာဝင်း】ဘိုးဘွားတွေရဲ့ ပြောတဲ့စကားကို နားမလည်တဲ့အခါ တာဝန်ကျတဲ့နေ့ရဲ့ အထက်အရာရှိကို မေးပါတယ်။
ဂျပန်ကိုလာပြီးမှ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်း ဘယ်လောက်တိုးတက်လာခဲ့လဲ?
【မာမာဝင်း】တော်တော်လေး တိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ဂျပန်ကို ရောက်ခါစတုန်းက ဂျပန်စကားကို လုံးဝပြောမထွက်ခဲ့ပါဘူး၊ ခုအချိန်မှာတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ တန်းတူ ပြောနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာပါပြီ။
【မာမာဝင်း】စာအုပ်ဖတ်တာတို့ နားမလည်တဲ့ ခန်းဂျိ တွေကို အဘိဓာန်ထဲမှာ ရှာတာတို့၊ ဂျပန်လူမျိုး အထက်အရာရှိတွေကို မေးတာတို့ လုပ်ပြီးတော့ ဂျပန်ဘာသာကို လေ့လာသင်ယူပါတယ်။
【အိအိမွန်】အင်တာနက်ထဲကနေပြီးတော့ ဂျပန်ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ရှင်းပြတာတွေကို နားထောင်တယ်၊ ပြီးတော့ စာအုပ်နဲ့လဲ လေ့လာနေပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ဂျပန်စာကို လေ့လာတာတို့၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာတို့ လုပ်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】အိမ်မှာနေပြီးတော့ စာလေ့လာတယ်၊ တခါတလေကျရင် အပြင်ထွက်ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ရေဘဝဲမုန့်ပါ၊၊ ရေဘဝဲကို အလယ်မှာထည့်ပြီးတော့ မုန့်နှစ်နဲ့အလုံးလေး လုပ်ထားတဲ့ တခိုယခိ လို့ ခေါ်တဲ့မုန့်ကို ကြိုက်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】ခရဲရိုက်စု လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ပဲကုလားဟင်းနဲ့ တူတဲ့ အရသာရှိတဲ့ အဲဒီဟင်းကို ကြိုက်ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ဂျပန်ပင်လယ်ပါ၊ ရေတွေက သန့်ရှင်းပြီး အပြာရောင်ဖြစ်နေတာရယ်၊ ရေလှိုင်းတွေကလဲ စီးဆင်းနေတဲ့အတွက် တော်တော်လေးလှပြီးတော့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေပါတယ်။
【အိအိမွန်】တိုက်ခန်းကနေပြီးတော့ စက်ဘီးနဲ့သွားလို့ရှိရင် ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြာပြီးတော့ အိုတိုခိနော့မိုရိ လို့ ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ပန်းတွေက အရမ်းလှတဲ့အတွက် အဲဒီနေရာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
【မာမာဝင်း】ဂျပန်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရပြီး စောင့်ရှောက်ခံဘိုးဘွားတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ နည်းပညာတွေက မြင့်မားပါတယ်၊ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူဝယ်နိုင်ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေက အရည်အသွေးကောင်း၊ လတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့် လာစေချင်ပါတယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
【အိအိမွန်】မြန်မာလူမျိုးတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုသိုလ်တွေလို လိုချင်တဲ့အတွက် ကုသိုလ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို နေ့တိုင်း ရှာပြီး လုပ်နေကြပါတယ်၊ အဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအလုပ်ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ အရမ်းကို ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီအလုပ်ကို လာဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်၊ အဲဒါအပြင် ကိုယ်က အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်မိသားစုကို ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်တာတွေက ကိုယ့်ဒီမှာ ကိုယ့်ဘဝ ဖြတ်သန်းနေရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေက ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ရလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအလုပ်နဲ့ လာဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။